Oduu Gaddaa: Odeeffannoon argannee namni gaditti – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsOduu Gaddaa: Odeeffannoon argannee namni gaditti
Oduu Gaddaa: Odeeffannoon argannee namni gaditti argitan maqaan ishee Hayaat Diinii jedhamti.
Odeessi nu gahe Hayaat Diinii namoota bara darbe Lola Liyyuu Ayilii daangaarraan Oromoota Baha jiraatan irratti banamee hedduun buqqaa’an keessaa nama tokko turte. Dubartiin Oromoo kun ijoollee 3 fi abbaa manaashee waraana Liyyuu Ayilii sanaan duraa ajjeefamanii ofii lubbuu baafattee gara Sandaafaatti baqatte. Lola sana keessatti yakka gudeeddii fi yakkoota reebicha hammaataa irratti raawwataa turuu himani. Waraanni Liyyuu Ayilii bifa saalfachiisaa fi suukessaa ta’een guddeeddi jaallataa irratti raawwatee dhibee isheen fayyuu hindandeenyeef saaxile. Sanas deggarsa Qeerroof uummata Oromoo Sandaafaatti taasisaniin Xuqur Anbassaatti yaalamaa turte. Boodarra duuti injifatee addunyaa kanarraa guyyaa dheengaddaa Bitootessa 27 godaantee jirti. Akka gabaasa argannetti maatii mana tokkootu mana isaanii cufee waraana Liyyuu Ayilii kanaan ajjeefamee addunyaa kanarraa godaanee.
Uummata Oromootiif jajjabina hawwina! Rakkoo kana ofirraa qolachuu akka qabnuufis bakka maraa uummatni keenya gochaa kana akka balaaleffatu dhaamaa, yakka saamicha waraanni Liyyuu Ayilii waraana mootummaan deggaramee saamicha uummata Gujiirraan gahaa jiruuf manneen uummataa gubaa jiru uummatni akka balaaleffatu dhaamna!
Harargee bahaa Aanaa
dadar magaalaa soqaatti
dhiiga nama boochiftu
Iddoolee miidiyaan hin
Gahin waan arra arkine.
Afaan abbaa keenyaarraa
Araaraf galtanii Onnee hin buusinaa!
Irbuu irbuu waadaa sabaaf galuu kakuu kakuu caaluu irbuu galletti haa cichunuu haalli ammaatullee duubatti hin deebinuu
Jedha WBO Gaachanni sabaa.
Jaallan Zoonii kibbaa!
Godina w/b/ona Eebantuu ganda lalisaa bakka saqalaa jedhamuuf.
Bakka kanatti kora bittinneessaan maqaa eegumsa kaambii warra daandii hojjetanii jedhuun deebi’ee qubatee jira.
#Garuu kaayyoon WBO adamsuudha.kunis uummataan wbon eessa jira eenyutuu deggera jedhanii doorsisaa jiraachuun beekameera.
#*isin namoonni jara kana bira deemtanii namoota quuqama oromummaa qabaniifi haaloo dhuunfaa irraa qabdan keessa haaloo keessan ba’uuf dhugaa irraa ejjettanii maqaa xureessaa jirtanfi mandara gandichaa keessa deemtanii olola qabsoo bilisummaa laamshessu oofaa jirtan eenyu akka taatan tokkoo tokkoo keessan bira ga’ameera.isin ammaa kaastanii gocha diinummaa kana irraa of hin deebistan taanaan maqaa keessan QBO akka dabarsinu gamanumaan dhaamsa dabarsuu barbaanna. Ammas callistee hojii idilee kee maaf hin hojjetanne Xawalwaallee.
Gadaan gadaa xumuraa garbummaa tti!!
Jaal Dr.Taaddasaa (Fidoo) Eebbaa sabboontota Oromoo warra dura ABO bu’uuressanii fi gadi dhaaban keessaa isaan tokko.
Jaal Dr.Taaddasaa (Fidoo) Eebbaa hanga har’aan tana dadhabe, ifadhe, umriinis na deeme jedhanii qabsoo irraa, mirga Oromoof falmuu irraa, bilisummaa leellisuu irraa hin dhaabbanne. Kaayyoo ganama itti irbuu seenan irraa hin maqne.
Jaal Dr.Taaddasaa (Fidoo) Eebbaa hanga guyyaa har’aatti illee kaayyoo kana fiixaan baasuuf bakka ABO isaan erge hundatti bobba’anii dirqama dhaaba isaanii raawwataa jiru. Nagaa fi fayyaa haa kennuuf, umrii haa dheeressu.